UMucuca Prada ungumyili wezakhono. Akusiyo into yokuba wayinikezelwa ngokuphindaphindiweyo isihloko somyili wonyaka kunye nomvuzo we-Fashion Designers USA. Kodwa ngaphambi kokufumana udumo lwehlabathi elinjalo, uMicuccia ngokwakhe wahamba ngendlela enkulu enameva, echazwe malunga nembali yenkampani ye Prada, kwaye, ngelanga, ayibhalwa kwiincwadi zembali.
I-Prada yindlu eyaziwayo yefestile yehlabathi, evelisa ukuqokelela kweempahla zentengiso, izicathulo kunye nezixhobo. Isitayela sonke se-Prada brand singachazwa ngamagama amabini kuphela, awona awona ngempumelelo acacisa ingcamango yangaphakathi yegama ngokwalo-lubuchule obucacileyo, obucacileyo kunye nokuthintela. I-Prada iyatshintsha ngokupheleleyo yonke ingcamango jikelele malunga nomxholo onjengezesondo. Emva kwakho konke, imigca elukhuni kunye nezinto eziphathekayo zokugqithisa ngokukhawuleza ziguqula iingubo zalo mzobo zibe ngumfanekiso "winqaba engenakunqandwa", eyongezelela kubafazi ababagqokayo, i-piquancy ekhethekileyo, eyenza ibe yinkimbinkimbi kwaye ngexesha elifanayo likhangele. Ukuqwalaselwa ngokugqithiseleyo kwindlu yokurhweba uPrada igxininisa kwiingubo zangaphandle kunye nokulula kwangaphandle koyilo lwemizekelo yalo, evuyisayo kakhulu kwisini esifanelekileyo. Yingakho sagqiba ekubeni singene kwiimbali ze-brand Prada kwaye sitsho abafazi abathandekayo befashoni malunga neengcambu zabo.
Imbali ka Prada .
Imbali yemvelaphi kaPrada ivela eMilan, ngowe-1913. Omkhulu-mkhulu uMicuccia Prada, uMarda Prada, naye naye ungumseli walo mqondiso, wavula ishishini lakhe ukuvelisa izicathulo, iibhegi zesikhumba kwaye wabhalisa uphawu lwakhe. Ngaloo nyaka wavula ivenkile encinci, apho wathengisa le mpahla. Ukusebenzisa isikhumba se-walrus esityebileyo kwiingxowa zakhe, uMario wakwazi ukutsala ingqalelo kubathengi abanamandla kakhulu kwihlabathi lonke. Ngoko, isiTaliyane, kwaye i-Europe kunye ne-American ehloniphekile yaqala ukugqoka izihlangu kwi-couturier entsha kwaye ihambe kunye nabo eluhambweni olukhulu lwekhumba, iikhonksi zokuhamba ezazenziwe ngeenkuni, i-shell shell ne-crystals kunye negama elifanayo Prada. Ngelo xesha, uphawu lwabizwa ngokuthi "Abazalwana Prada", kodwa ukususela ngo-1958 ukuphathwa kweenkampani kwathatha intombi kaMario Prada - Louise Prada.
Imbali ka-1970 ikhunjulwa njengonyaka apho iYurophu neMelika ibona iqoqo lokuqala leengubo phantsi kwelebula yase Prada. Ezi zambatho zivele zilungiswe ukulungiswa kunye nekhontrakthi. Kodwa ngokubhekisele kwiengxowa, imfuno yazo iyancipha kakhulu. Okokuqala, le meko yenziwa ngenxa yokuba babenzima kakhulu kwaye abantu baqala ukuziva bengakhululeki ngenxa yale nto. Esi sizathu sokuba inkampani yaqala ukujamelana neengxaki zemali. Ngoko, phakathi kwekhulu lama-20, indlu yefestile yayingekho kwixesha elincomekayo kakhulu, kwaye ngelixesha apho inkampani iqhutywe nguMicuca Prada ngo-1970, bekuphantse kufumaneka ukuwa. Kodwa, uMicuccia nje wakwazi ukuphefumlela ubomi obutsha kwiinkampani kunye nezoshishino zentsapho. Ngoko ngo-1989 indlu yengubo iphinda ithole indawo eyaziwayo. Ngomnyaka ofanayo, phantsi kolawulo lomlawuli omtsha, umgca omtsha weentambo zeentombi kunye neengubo zeklasi yangaphambi kwe-party zaqaliswa. Le ngqokelela yayiquka ukulahlwa kwamathoni, apho kwakukho umnyama omnyama, kwaye imigca yayo yayilula kwaye ngexesha elifanayo kucocwa kwaye kwakungenako ukuguquka okubukhali kunye neengcamango ezahlukileyo. Emva kwalolu qoqo, indlu kaPrada yaphumelela ngokukhawuleza kubabathengi abaye bazinikela ngokukhethekileyo ukuphakama nobuchule.
Kwiminyaka engama-90 ye-Prada brand yazisa i-brand entsha ye-brand-Mio Mio. Igama lalo linikezelwa kwisibhengezo kwisigqithiso segama lomlawuli weenkampani iMicuccia. Ekuqaleni kweminyaka engama-90, uPrada uqalise umgca wemizila yezibuko, ukubonakala kweso sizwe esithatha imfashini esingazange samukele ngokukhawuleza. Ezi ngqungquthela zazibonakaliswe ngamanqwanqatha anqabileyo embalabala, kwaye emva kweminyaka emibini iilazi zaba yikhadi lebhizinisi eliyimfuneko kulo mqondiso.
Imibutho nezinye iinkampani .
Ekuqaleni kwee-1990, i-Prada brand yafumana indlu yefestile yaseFendi eFendi, ngenxa yokuba amatyala aqala ukuzisa inkampani. Kule nkalo, uPrada wabelana ngeFendi kunye nenkampani yaseFransi eyayibandakanyekayo kwishishini leshishini. Kodwa akuzange kusincede ukugcina indlu yokulahlekelwa yintambo yeFendi idlulele kwaye yayingathengiswa kuKumkani wePop Michael Jackson. UMichael Jackson uthumele ulawulo lwale nkampani kubantakwabo abancinci, uJanet Jackson, owathi wabiza kwakhona indlu yefestile uFendi kwindlu yefestile uJanet Jackson International. Okwangoku, le nkampani ikhiqiza iimpahla ezifake imfashiso, izicathulo, iziqhumiso, iziqholo, izixhobo, iingubo kunye nefenitshala.
Indlu yefestile ePrada namhlanje .
Ngoku uPrada wathabatha ukuveliswa kwezinto zokugqoka zabantwana, iziqholo kunye neziqhumiso phantsi kwegama elifanayo kwi-logo house house. Ngelinye igama, uphawu lukhulise kakhulu imveliso yalo kunye nentloko ejoliswe kumgangatho ophezulu kunye nesitayela se-bohemian. Kwaye konke ukubonga kuMiuccia Prada obalulekileyo. Nguye lo wesifazane owayenako ukudala umfanekiso omtsha wenkampani, kunye nesimo sakhe senkampani, esithetha ukuba ibhinqa elisuka ePrada linokukwazi ukufumana isicatshulwa kakhulu sesitayela, isithandana kunye nesetyhini, ikhetha ukunciphisa ubuncinane, into edibanisa kakuhle nezo zesini. Ukongeza, i-brand Prada inemibala yayo yembala - ibomvu, emhlophe, emnyama kunye nekhilimu. Kwakhona abantu abanomdla wefashini yengubo yaba ngabadumileyo, njengoCameron Diaz, uSalma Hayek, uParis Hilton kunye no-queen of pop Madonna. Yaye le yimpumelelo efanelekileyo yegama elihle kunye nomfazi omkhulu eMicuccia Prado!
Amashishini kunye neevenkile.
Ngaphantsi kwelophawu oludumile lwe Prada kukho ininzi enkulu yokugcina iifashthi kuzo zonke iidolophu ezinkulu kwihlabathi. Ngokomzekelo, e-US kukho ama-boutiques ezi-10 kunye neevenkile ezinkulu ezi-2 ezikuloo mizi emikhulu njengeNew York, iSan Francisco, iLas Vegas, iChicago, i-Aspen, iLos Angeles (iBeverly Hills), iBoston nabanye.
Ngelinye igama, le ndlu yefashini ayiyona nje itywala namhlanje, yimbuso yonke, imbali eyaqala kwi-1913 ekude kwaye iphela kulolu suku!
I-Top-5 yobusika obuphambili bengubo zangaphantsi-2017
Ungaziqonda njani ukukhulelwa?
Indlela yokunciphisa umzimba ngokutya kwabantwana
Umlingisi uClaire Holt
I-Asparagus: inzuzo kunye nenzakalo
I-Chocolate Cappuccino yonyaka omtsha
Indlela yokukhetha iidipe kunye namakhethini ngokuchanekileyo
I-sauce ye-nut ngegalikhi eTououse
Umthandi-mnye u-Xenia Borodina wanquma ukutshintsha ubomi bakhe obusondeleyo
Unyango lweentsholongwane kunye nezifo ekukhulelweni
Ukutya kukaBruce Lee nokutya